ရိုဟင်ဂျာစခန်း အင်တာနက် ပြန်တပ်ပေးဖို့တောင်းဆို၊ ကိုဗစ်ကို ကုနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဆေး ဂျပန်တိုးထုတ်မယ်
ရိုဟင်ဂျာစခန်း အင်တာနက် ပြန်တပ်ပေးဖို့တောင်းဆို၊ က...
5 เม.ย. 2563 - 22:17 น.
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဖို့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ အင်တာနက်ပြန်ဖွင့်စေလို
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံက ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက် ပြန့်ပွားမှု ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ဖို့အတွက် အင်တာနက်လိုင်းတွေ ပြန်တပ်ပေးပါ ဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
သိန်းနဲ့ ချီတဲ့ ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင် မိသားစုတွေ နေထိုင်ရာ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က စပြီး အာဏာပိုင်တွေက မိုဘိုင်းကွန်ရက်တွေကို ကန့်သတ်ထားခဲ့တာပါ။
ဒါကြောင့် ဗိုင်းရပ်ပြန့်ပွားမှုကို အကောင်းဆုံး ကာကွယ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဒုက္ခသည်တွေသိအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ အခက်အခဲတွေ ရှိနေတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားတဲ့ အဖွဲ့တွေက ပြောပါတယ်။
အထည်ချုပ် အလုပ်သမားတွေ အလုပ်ပြန်ဆင်း
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က အထည်ချုပ် စက်ရုံ အလုပ်သမားတွေလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရစ် ကူးစက် ပျံ့နှံ့မှုတွေ ရှိနေတဲ့ကြားက အလုပ် ပြုတ်မှာ စိုးတဲ့ အတွက် ထောင်နဲ့ ချီပြီး အလုပ်ကို ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။
အတော်များများက လူတွေ ကျပ်သိပ်နေတဲ့ ဖယ်ရီကူးတို့ သင်္ဘောတွေနဲ့ မြို့ကို အလုပ်လာကြရပါတယ်။ တချို့ စက်ရုံပိုင်ရှင်တွေက တနင်္ဂနွေနေ့ စက်ရုံပြန်ဖွင့်မယ် ပြောပေမဲ့ အာဏာပိုင်တွေက ပိတ်ဖို့ ပြောလို့ နောက်ထပ် ၁၀ ရက်အထိ ပိတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကိုဗစ် ကုနိုင်မယ်လို့ ယူဆတဲ့ ဆေး ဂျပန်တိုးထုတ်မယ်
ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ ကိုဗစ်-၁၉ ကုသရေးမှာ ထိရောက်တာတွေ့ရတယ်လို့ တရုတ်နိုင်ငံက ပြောတဲ့ တုပ်ကွေးဆေးတစ်မျိုးကို ပိုမိုထုတ်လုပ် တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံ Fujifilm ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်တဲ့ Avigan ဆေးကို ဗိုင်းပ်စ် စတင် ဖြစ်ပွားတဲ့ ဝူဟန်မြို့မှာ စမ်းသပ် သုံးစွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆေးက ဗိုင်းရပ်စ် ပိုး ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ပြန့်ပွားမှုနှုန်းကို လျှော့ချနိုင်လို့ ရောဂါ လက္ခဏာတွေကို သိသိသာသာ လျော့သွားစေခဲ့တယ်လို့ ဆရာဝန်တွေက ပြောပါတယ်။
လာမယ့် နှစ်မှာ လူ နှစ်သန်းကို ကုသနိုင်မယ့် ဆေးတွေ ထုတ်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ဂျပန် အစိုးရက မျှော်လင့် နေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေက ကျန်းမာရေး အရာရှိတွေတော့ ဒီဆေးက အတည်မပြုနိုင်သေးကြောင်းနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ အတွက် ပြင်းထန်တဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေ ရှိနိုင်သေးတယ်လို့ သတိပေးနေပါတယ်။
ဂျပန်မှာ ပထမဆုံး စမ်းသပ်မှုက ဇွန်လမှာ ပြီးဆုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားလို့ လိုချင်တဲ့ နိုင်ငံတွေရှိရင် အလကားပေးမယ်လို့ ဂျပန်က ပြောပါတယ်။
ပိတ်ထားရာက တပြိုင်နက် ပြန်ဖွင့်ကြလို့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် သုံးလိုအား ရုတ်တရက် အကြီးအကျယ် အတက်အကျဖြစ်သွားရင် ဗို့အားတွေ အများကြီး အရှိန်နဲ့ ထိုးတက်လာတာမျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ အိန္ဒိယက ပြည်နယ် အတော်များများမှာ ရှိတဲ့ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ဘုတ် အဖွဲ့တွေက သတိပေးနေပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ရိုဟင်ဂျာစခန်း အင်တာနက် ပြန်တပ်ပေးဖို့တောင်းဆို၊ ကိုဗစ်ကို ကုနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဆေး ဂျပန်တိုးထုတ်မယ်